मधुमेह घर-घरको समस्या, के खाने के नखाने ? « Naya Page
मधुमेह घर-घरको समस्या, के खाने के नखाने ?
नेपालमा मधुमेहका नौं लाख विरामी, विश्वमा मधुमेहका विरामी ४२ करोड ४८ लाख पुग्यो
प्रकाशित मिति : 19 November, 2019 2:52 pm
काठमाडौं, ३ मंसिर । आजभोलि कम उमेरका मानिसमा पनि मुटुरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरु लाग्न थालेको छ ।
‘त्यसका कारणहरू हाम्रै हातमा छन्’, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्, ‘हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका कुरा छन् । हाम्रो आनाबानी, रहनसहन, खानपानका कुरा, व्यायाम नगर्ने र अर्को ठूलो समस्या तयारी खानेकुरा रहेको हो ।’ उनका अनुसार जीवनशैलीसँग जोडिएका कुराहरू सबै मधुमेह रोगसँग मात्रै नभई मृत्युको जोखिम निम्त्याउने अरू कारणसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छन् ।
सन् २००५ मा मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये ११ औं स्थानमा रहेको मधुमेह सन् २०१६ मा छैटौं स्थानमा उक्लेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हामीलाई थाहा छ सानैदेखि ‘ब्यालेन्स डाइट’ (सन्तुलित भोजन) गर्नुपर्छ भनेर सबैले पढ्दै आएको हो । तर ‘सन्तुलित भोजन’ ग्रहण नगरेका कारण मानिस विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुँदै आएको छ । मीठोमीठो खानेकुरा खाने नमिठो नखाने मानिसको प्रवृत्ति, उसको कार्य व्यस्तता आदि कारणले अस्वस्थ्यकर खाना खाइरहेका छन् ।
हाम्रो समाजमा पनि केही दशकदेखि मधुमेह एक जटिल तथा घर–घरका समस्याका रुपमा विस्तार हुँदै आएको छ । नेपाल मधुमेह समाज स्थापनाको ५० वर्षमा मधुमेहका रोगी घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा ‘डाइबिटिज’ भनिने यस रोगलाई नेपालीमा ‘मधुमेह’ वा ‘चिनी रोग’ का रुपमा चिनिन्छ ।
नेपाल मधुमेह समाजका अनुसार विश्वका प्रत्येक ११ व्यक्तिमध्ये एक जनामा मधुमेह रोग लागेको पाइएको छ । मधुमेहका कारण प्रत्येक ६ सेकेण्डमा एक जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २००० मा विश्वमा मधुमेहीको संख्या रु १७ करोड १० लाख रहेकामा सन् २०१७ को अन्तसम्ममा यो संख्या बढेर ४२ करोड ४८ लाख पुगेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार भारत र चीनमा सबैभन्दा बढी चिनी रोगी (मधुमेह) छन् । नेपालमा ४० वर्षमाथि उमेरका तीन जनामध्ये एकजनामा शुरुवाती मधुमेह हुने गर्दछ । काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणमा ६० वर्ष उमेरमाथिका चार जनामध्ये एक जना यो रोगबाट ग्रसित रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा नौ लाख मानिस मधुमेहबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्क छ ।
मधुमेह तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा प्रदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार मानिसको शरीरभित्र रहेको प्याङ्क्रिज नामक अङ्गले नियमितरुपमा ‘इन्सुलीन’ निकाल्ने काम गर्दछ । यही ‘इन्सुलीन’ मार्फत व्यक्तिको शरीरभित्र रहेको चिनी शोषण गरी रक्तनलीमार्फत शरीरका विभिन्न अङ्गभित्र पठाउँछ ।
इन्सुलीनले प्रभावकारी अथवा राम्ररी काम गर्न नसकेको अवस्थामा शरीरभित्र रहेको चिनी रक्तनलीको कोसिकामा पस्न नसकी शरीरमा रहेको रगतमा चिनी जम्मा हुनुलाई नै चिकित्सकको भाषामा ‘डाइबिटिज’ (मधुमेह) भनिन्छ ।
डा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्याङ्क्रिजले पर्याप्त इन्सुलीन नबनाउने र लिभरले सुगर (चिनी) बढी निकाल्ने (फाल्ने) ‘डाइबिटिज’ को शुरु लक्षण हो । यस्तो अवस्थामा चिनी रगतमा जम्मा भई लिभरले रगतमा चिनी नै चिनीले भरि दिने काम गर्दछ ।’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार कार्बोहाइड्रेटले इन्सुलीन बढी निकाल्ने तथा मानिसले दिनदिनै भात खाँदा दैनिक इन्सुलीन निकाल्छ ।
विश्वमा सन् १९७० पछि डाइबिटिज महामारीको रुपमा शुरु भयो । सन् १९७५–२०१५का बीच विश्वमा मोटोपना २.७८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । वंशाणुगत गुणका कारण पनि मधुमेहको रोगी बढेको पाइन्छ ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ शैलाज रञ्जीतकारले भने, ‘हाम्रो शरीरमा रगत जाने नशा टाउकादेखि पैतालासम्म फैलिरहेका हुन्छन् । मानिसको खुट्टामा डाइबिटिज भयो भने खुट्टामा इन्फेक्सन हुने, हड्डी बिग्रने हुन्छन् । त्यसकारण बिरामी सतर्क हुनुपर्छ र समयमा नै चिकित्सक कहाँ पुग्नुपर्छ । उनका अनुसार मानिसको पाइतालामा धेरै स–साना हड्डी हुन्छ । नशामा रगतको आपूर्ति राम्रो भएन भने सङ्क्रमण हुन्छ र रगत जाने नशालाई सङ्क्रमणले खाइदिन्छ ।’
तिलगङ्गा अप्थाल्मोलोजी इन्ष्टिच्युटका नेत्ररोग विशेषज्ञ इलि प्रधानले हरेक व्यक्तिले समय समयमा आँखाको जाँच गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै विश्वका आँखा रोगीमध्ये ५ प्रतिशत मधुमेहका कारण सदाका लागि आँखाको दृष्टि गुमाउने गरिएको जानकारी दिइन् ।
आँखाका रोगी समयमा नै अस्पताल पुगेर चिकित्सा सेवा लिएमा ९० प्रतिशत आँखाका ज्योति बचाउन सक्ने बताउँदै उनले ढिलो गरी अस्पताल पुगेका बिरामीको आँखाको दृष्टि बचाउन नसक्ने बताइन् । उनले चस्माको पावर छिटोछिटो बढ्नुका कारणमा मधुमेहको लक्षण पनि भएको बताइन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार, विलासी जीवनशैली र खानपानमा गरिने लापर्बाहीका कारण मधुमेहसँग सम्बन्धित समस्या बढेका छन् । खाद्य प्रविधिविज्ञ आलोक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कारणहरू हाम्रै हातमा छन् । हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका कुरा छन् । हाम्रो आनाबानी, रहनसहन, खानपानका कुरा, व्यायाम नगर्ने र अर्को ठूलो समस्या तयारी खानेकुरा हो ।’
मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार मधुमेह रोग लागेका व्यक्तिले विशेष गरेर ग्लुकोजयुक्त वा सजिलै ग्लुकोजमा परिणत हुने खालको खानेकुराको सेवनमा कमी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । त्यस्तै कोलेष्ट्रोलयुक्त खाना कम गर्ने र रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेचुरल फुड अर्थात् पोलिस नगरिएका चामल, फलफुल तथा सागसब्जीको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ ।
मधुमेह भएका मानिसले थोरै थोरै गरेर दिनको ६ पटक खाना खानुपर्ने डाक्टर रेग्मी बताउँछन् । किड्नीलाई भार पर्न नदिन प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा मिलाएर खाना खानुपर्छ । प्लान्ट ओरिजिनबाट बनेका तेलमा कोलेष्ट्रोल हुँदैन । एनिमल ओरिजिन फुडमा कोलेष्ट्रोल हुन्छ ।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीले मधुमेहले शरीरका आन्तरिक अङ्ग आँखा, मुटु, मिर्गाैला तथा दिमागलाई हानी गर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नभएको बताउँदै रक्तचाप, मोटोपन आदि मधुमेहसँग जोडिएर आउने रोग भएको बताए । उनका अनुसार मधुमेहले व्यक्तिको शरीरभित्र रहेको रगतलाई बाक्लो बनाइ दिन्छ । यसले रक्तनलीको भित्री भागलाई विगारी दिने तथा रक्तनलीमा कोलेष्ट्रोल डिपोजिट गरिदिन्छ ।
व्यक्तिले आफनो जीवनशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने सल्लाह दिँदै उनले सन्तुलित भोजन (जसमा क्यालोरीको मात्रा फिक्सड हुनुपर्छ ), दैनिक ६० मिनेट ब्यायाम, धूमपान गर्न नहुने, तौल घटाउने तथा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट ।
अण्डा–व्यक्तिले अण्डाको पहेंलो भाग (कोलेष्ट्रोल) खान हुन्छ । व्यक्तिले खाद्यवस्तुको प्रयोग गरी खाएको कोलेष्ट्रोलको २० प्रतिशत मात्र रगतमा जम्मा हुनजान्छ । दैनिक मानिसले प्रयोग गरिने चामल, मैदा, आँपआदिमा कोलेष्ट्रोल हुन्छ ।
एक स्वस्थ्य व्यक्तिले दिनको एक पहेंलो भागसहितको अण्डा खान सकिन्छ । तर असन्तुलितरुपमा धेरै खान नहुने चिकित्सकको सल्लाह छ ।
‘रसबरी–मधुमेह भएका मानिसले पनि मात्रा मिलाएर रसबरी खान मिल्छ । खानै नहुने भन्ने होइन’, डा रेग्मी भन्छन् ।
त्रिवि व्यवस्थापन संकायका सबै परीक्षा स्थगित
कोरोनाबाट २४ घण्टामै चार जनाको मृत्यु, नेपालमा मृत्तकको संख्या ७९ पुग्यो
उपत्यकामा आज थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या १,१७९ पुग्यो
काठमाडौं, २६ साउन । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले भदौ दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुने भनिएका व्यवस्थापन संकाय
काठमाडौं, २६ साउन । काठमाडौंको गोंगबुमा विभत्स अवस्थामा सुटकेशमा फेला पारिएको शवको पहिचान खुलेको छ
काठमाडौं, २६ साउन । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै चार जनाको ज्यान गएको